【 ဆောငျးပါး 】 “ဘာရှေးမလဲ” | Opinion Leaders
“နာမညျတဈလုံးက ရှထေကျတနျဖိုးရှိတယျ။ဒါကွောငျ့၊ လူတဈယောကျ တနျဖိုး ရှိ၊ မရှိဆိုတာ သူဘယျလောကျနာမညျ ကောငျး၊ မကောငျးကွညျ့ပွီး သိနိုငျတယျ”
“ဒါကွောငျ့မို့ လူတှကေ နာမညျလှလှလေးတှမှေညျ့တာပေါ့၊ ဟုတျလား”
“စကားကို အဲဒီလိုကပျမပွောနဲ့လေ။ငါပွောတဲ့ နာမညျကောငျးဖို့လိုတယျဆိုတာက ကိုယျကငျြ့တရားကောငျးဖို့၊ ကိုယျ့ကွောငျ့ သူတဈပါးမနဈနာစဖေို့၊ ဖွဈနိုငျရငျ အမြားသူငါကောငျးစားရေးအတှကျ ကိုယျ့ရဲ့အကြိုးကိုစှနျ့လှတျနိုငျဖို့ အဲဒီလိုလူမြိုးကိုမှ နာမညျကောငျးတဲ့လူလို့ ပွောခငျြတာ”
“သူခိုးတို့၊ ခါးပိုကျနှိုကျတို့၊ ဓါးပွတို့၊ လူလိမျတို့က နာမညျမကောငျးတဲ့သူတှေ။ဒီလိုလား”
“ကြောငျးဆရာတို့၊ ဆရာဝနျတို့၊ ဘုရငျတို့လို လူတှကေမှ နာမညျကောငျးတဲ့သူတှလေို့ ပွောခငျြတာလား”
“ဒါဆို အင်ျဂုလိမာလကို လကျညှိုးတှလေိုကျဖွတျအောငျ သငျပေးတဲ့ဆရာက လူကောငျးပဲလား။သူ့နာမညျကကောငျးလား။အဖကေိုပွနျသတျအောငျ သငျပေးတဲ့ ဒဝေဒတျလို ဆရာမြိုးကရော နာမညျကောငျးရတဲ့ လူကောငျးပဲလား။သူ့လြှာ အရသာခံဖို့အတှကျ တိုငျးသူပွညျသားတှရေဲ့ အသကျကိုသတျပွီး အသားကိုစားတဲ့ ပေါရိသာဒလို ဘုရငျကိုရော လူကောငျးလို့ပဲပွောမှာလား”
“တဈယောကျတလေ ဖေါကျပွနျတာကိုတော့ ထညျ့ပွောလို့ မဖွဈဘူးလဟော”
“တဈယောကျတလလေို့ မပွောပါနဲ့။တခြို့တလလေို့ ပွောစမျးပါ”
“နငျကလညျး၊ စကားကို အထအနကောကျနပွေနျပွီ။ကဲပါ နငျပွောသလို တခြို့တလပေဲထားပါတော့။ဒါပမေယျ့ အမြားစုက ကောငျးတယျလဟေယျ”
“အားလုံးကောငျးဖို့ အရေးကွီးတာလဟော။အဲဒီဖေါကျပွနျတဲ့တခြို့ကွောငျ့ လောကကွီးအရုပျဆိုးနရေတာမဟုတျလား။အင်ျဂုလိမာလဖွတျခဲ့တဲ့ လကျညှိုးက တဈထောငျမှမကတာ။ပေါရိသာဒဘုရငျကွောငျ့ ပွညျသူတှေ ဘယျနှယောကျတောငျသခေဲ့လဲ။
ဘဝတှေ ဘယျလောကျပကျြခဲ့လဲ။စိတျဆငျးရဲ၊ ကိုယျဆငျးရဲ ဘယျလောကျဖွဈခဲ့ကွမလဲ”
“ဟုတျပါပွီ။သူတို့တတှေ ဘယျလောကျခှနျအားကွီးကွီး၊ ဘယျလောကျအာဏာရှိရှိ၊ ဘယျလောကျပညာတတျတတျ ဘယျလောကျခမျြးသာခမျြးသာ ကိုယျကငျြ့တရားမကောငျးတော့၊ အမြားအပျေါ မတ်ေတာမထားတော့၊ အတ်တကွီးတော့ တခွားလူတှေ ဒုက်ခရောကျရတယျလေ။သူတို့နာမညျမကောငျးတော့ဘူးလေ။ဒါကွောငျ့ ငါပွောတယျမဟုတျလား။နာမညျက ရှထေကျရှားပါတယျလို့”
“နငျကတော့လေ။ဆိုငျဆိုငျ၊ မဆိုငျဆိုငျ နငျပွောခငျြတာကို မရ ရအောငျ ဇှတျပွောတော့တာပဲ”
“အေးပါ။ငါပွောခငျြလှနျးအားကွီးလို့ပါ။ဒီနေ့ အာဇာနညျနလေ့ေ။အခု၊ ငါတို့ ဗိုလျခြုပျနဲ့ အာဇာနညျခေါငျးဆောငျကွီးတှကေို ဂါရဝပွုဖို့ စောငျ့နတောမဟုတျလား။ဒါကွောငျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအကွောငျး ပွောခငျြလို့ စကားစတာပါ”
“သွျော ဗိုလျခြုပျရဲ့ မြိုးခဈြစိတျရှိတာ၊ ခေါငျးဆောငျကောငျးပီသတာ၊ နိုငျငံနဲ့လူမြိုးအတှကျ အသကျကိုစှနျ့ဝံ့တာ၊ ကိုယျကြိုးလုံးဝမဖကျတာ၊ ဒါကွောငျ့လညျး လူသပေမေယျ့ နာမညျမသခေဲ့တာ၊ အုပျခြုပျသူတှကေ ဗိုလျခြုပျကို သမိုငျးထဲကဖယျထုတျဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ ပတ်တမွားမှနျရငျ နှံမှာမနဈဆိုတာလို ပွညျသူတှအေားလုံးရဲ့ အသညျးထဲ၊ ရငျထဲမှာ တို့ဗိုလျခြုပျရှိနတောပါလားဆိုတာ ပိုလို့ပိုလို့သိလိုကျရလို့ ဗိုလျခြုပျကိုရညျရှယျပွီး “နာမညျက ရှထေကျရှားတယျ” လို့ ငါစကားစခဲ့တာပါ”
“ဗိုလျခြုပျကို လုပျကွံတဲ့သူတှသော တကယျလို့ အဲဒီအခြိနျကစိတျပွောငျးသှားပွီး ဗိုလျခြုပျရဲ့ကြေးဇူးကို ဆငျခွငျမိတာမြိုး၊ ဗိုလျခြုပျကို အားနာမိတာမြိုး၊ ပွညျသူတှရေဲ့မကျြနှာကို မွငျယောငျမိတာမြိုး၊ အနညျးဆုံး လူတဈယောကျရဲ့ အသကျတဈခု၊ ဘဝတဈခုကို မဖကျြဆီးခငျြတော့တာမြိုး အသိလေးတဈခကျြ၊ သတိလေးတဈခကျြလောကျမြား ဝငျဖွဈခဲ့ရငျ အားလုံးပွောငျးပွနျတှဖွေဈကုနျမှာပဲနျော။ဗိုလျခြုပျနဲ့အတူ နငျတို့၊ ငါတို့ အဘိုးတှေ၊ အဘှားတှေ အရမျးပြျောခဲ့ကွရမှာ။တို့နိုငျငံလညျး အခုလောကျဆို အတျောကွီးတိုးတကျနမှော--လို့”
“ဘယျတတျနိုငျမလဲဟာ။သူတို့က ဗိုလျခြုပျနဲ့ နိုငျငံတျောအတှကျ မစဉျးစားဘဲ တဈဖကျက အာဏာနဲ့ငှကေို စဉျးစားလိုကျတာကိုး”
“အငျး--သူတို့ရှေးခယျြခကျြ အမှားတဈခုကွောငျ့ ငါတို့တဈနိုငျငံလုံး ဒုက်ခပငျလယျမှာ အနှဈခုနဈဆယျနီးပါး မြောနရေတော့တာပေါ့”
အာဇာနညျဗိမာနျရှိ ဗိုလျခြုပျနှငျ့တကှ ကဆြုံးလပွေီးသော အာဇာနညျခေါငျးဆောငျကွီးမြားကို ဂါရဝပွုရနျစောငျ့နစေဉျ၊ အနီးရှိ လူငယျအုပျစုမှ မိနျးမပြိုလေးနှဈယောကျ၏ ပွောစကားမြားကို ကွားခဲ့ခွငျးပါ။
အလှမျးလာ၍ လကျတို့ဆိုတာလို သူတို့ပွောခါမှ ဗိုလျခြုပျကို ပို၍တမျးတလာမိသညျ။ပွညျသူအားလုံးလညျး တမျးတနကွေမှာပါ။လှမျးနကွေမှာပါ။သားသမီးတှကေ အမကေို့ သတိရတာမြိုး၊ တမျးတတာမြိုးပါ။
သားသမီးတှဟော အမကေို့ လုပျကြှေးဖွဈတာ၊ မလုပျကြှေးဖွဈတာထကျ အမကေို့တော့ ထူးထူးခွားခွား ခဈြကွပါသညျ။လှမျးကွပါသညျ။တမျးတကွပါသညျ။
အထူးသဖွငျ့ နို့ဆာသညျ့အခါမြိုး၊ ပငျပနျးဆငျးရဲသညျ့အခြိနျမြိုး၊ ကူညီဖေးမမညျ့သူမရှိဘဲ လောကဓံကို တဈယောကျတညျး ရငျဆိုငျဖွတျသနျးရသညျ့အခါမြိုးတှမှော မကျြရညျတှေ၊ ရှိုကျသံတှနှေငျ့အတူ အမကေို့ ပို၍လှမျးတတျကွသညျ။ပို၍တမျးတတတျကွသညျ။
အမကေ အနားမှာမရှိသညျ့အပွငျ မိထှေးအနှိပျစကျကို ထပျ၍ခံလိုကျရသောအခါမြိုးတှငျမူကား မိထှေးကို မုနျးတီးနာကွညျးစိတျနှငျ့အတူ အမကေို့နှမွောတမျးတစိတျက ရငျထဲမှာလညျးမဆံ့၊ ဦးနှောကျကလညျးမထိနျးနိုငျလောကျအောငျ ခံစားရတတျတာပါ။အမိမဲ့သား ရနေညျးငါး ဆိုသလိုပေါ့။ပွညျသူတှေ အဲဒီလိုတမျးတကွတာပါ။ဗိုလျခြုပျကို အဲဒီလိုလှမျးကွရတာပါ။
အာဇာနညျပုဂ်ဂိုလျသညျ အမှနျ၊ အမှားကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျပွီး၊ အမြားအကြိုးအတှကျ အမွဲနှလုံးသှငျးကာ သကျစှနျ့ကွိုးပမျးဆောငျရှကျသူဖွဈပါသညျ။အမှနျတရားကို ရငျမှာထားသူဖွဈ၍ ကွောကျရှံ့အားငယျစိတျမရှိသူ ဖွဈပါသညျ။အတ်တကို စှနျ့လှတျနိုငျသူဖွဈ၍ self-confidence အပွညျ့ရှိသူဖွဈပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့လညျး တဈယောကျ၊ တဈရာ၊ တဈထောငျမက တဈကုဋမှော၊ ကုဋတေဈရာမှာ တဈယောကျရှိဖို့ မလှယျသူမြိုးပါ။သူတို့၏စှမျးအားကကွီးပါသညျ။သူတို့၏သှေးကပဈြပါသညျ။ရဲရဲနီပါသညျ။
အာဇာနညျဗိုလျခြုပျ၏ သှေးတဈစကျသညျပငျ ယနေ့ ပွညျသူမြား၏ဘဝကို အကာအကှယျပေးနပေါပွီ။အလငျးရောငျပေးနပေါပွီ။လမျးပွပေးနပေါပွီ။
အာဇာနညျမြားက သူတို့ကိုယျကြိုးနှငျ့ ပွညျသူ့အကြိုး နှဈခုတှငျ ပွညျသူ့အကြိုးကိုသာ ရှေးခယျြကွပါ သညျ။
အာဇာနညျစိတျမရှိသညျ့အပွငျ အာဇာနညျမြားအပျေါ မနာလိုစိတျ၊ ရနျလိုစိတျထားသူမြားကတော့ သူတို့ကိုယျကြိုးနှငျ့ ပွညျသူ့အကြိုး နှဈခုတှငျ သူတို့ကိုယျကြိုးကိုသာ ရှေးခယျြကွပါသညျ။
နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျမြားသညျ နိုငျငံကို ကိုယျစားပွုပါသညျ။ပွညျသူကို ကိုယျစားပွုပါသညျ။ထို့ကွောငျ့၊ နိုငျငံ့ကောငျးကြိုး၊ ပွညျသူ့ကောငျးကြိုးကိုသာ ဆောငျရှကျရပါသညျ။
Francis Bacon ၏ အဆိုလေးကို သတိရပါသညျ။
“အကွံကောငျးပေးသောသူသညျ (သငျ့အား) လကျတဈဖကျဖွငျ့ကူညီသူဖွဈ၏။အကွံကောငျးရော၊ လကျတှနေ့မူနာပါပွသောသူသညျ လကျနှဈဖကျလုံးဖွငျ့ကူညီသူဖွဈ၏။သို့သျော ကောငျးသော ဆုံးမစကားကိုပွောပွီး မကောငျးသောနမူနာကိုပွလြှငျမူ လကျတဈဖကျကဆှဲတငျ၍ ကနျြလကျတဈဖကျက ဆှဲနှဈသူဖွဈလသေညျ။”
ပွညျသူတှေ တကယျလိုအပျတာက ပွညျသူကိုတနျဖိုးထားသော ခေါငျးဆောငျမြိုးဖွဈသညျ။
ပွညျသူတှရှေောငျရမှာက ပွညျသူကိုတနျဖိုးမထားသော ခေါငျးဆောငျမြိုးဖွဈသညျ။
အငျးဝခတျေက ဟံသာဝတီဘုရငျ ရာဇာဓိရာဇျ၏ သူရဲကောငျး လဂှနျးအိနျ ပုသိမျသားတို့ကို အောငျပှဲမဆငျမီကဖွဈသညျ။ပုသိမျသားတို့ကိုတိုကျရနျ ဝငျရောကျရမညျ့ခြောငျးသညျ အလှနျကဉျြမွောငျးသဖွငျ့ ပွနျထှကျရနျမလှယျကူလှပေ။အတှငျးသို့ဝငျတိုကျမိသညျဆိုသညျနှငျ့ သဖေို့ကမြားပသေညျ။
ရာဇာဓိရာဇျက တိုကျပှဲအတှကျ နညျးပရိယာယျကိုတော့ အစီအစဉျဆှဲပေး၏။တိတျတဆိတျသှား၍ ထိုခြောငျးထဲတှငျ တိုငျမြားစိုကျရမညျ။ရတေကျခါစတှငျ တိုငျဖြားမြားပျေါရုံလေးရှိပွီး၊ ရဆေကျတကျလာလြှငျ တိုငျဖြားနဈအောငျစိုကျထားစေ၏ လဂှနျအိနျကိုယျတိုငျ ထိုခြောငျးအတိုငျးဝငျ၍ ပုသိမျသားတို့ကို စဈမွှူရမညျ။ပုသိမျသားတို့ထှကျတိုကျလြှငျ စိုကျထားသညျ့တိုငျမြားကို လှတျအောငျလှျော၍ ပွနျပွေးထှကျရမညျ။ပုသိမျသားတို့က အငျနှငျ့အားနှငျ့လိုကျတိုကျလိမျ့မညျ။ထိုအခါ ပုသိမျသားတို့၏လှမြေား တိုငျမြားအကွားတှငျငွိပွီး ကနျ့လနျ့ခံနလေိမျ့မညျ။သညျတော့မှ ရှတေို့းမရ၊ နောကျဆုတျမရနှငျ့ တဈစုတဝေးတညျးဖွဈနသေော ပုသိမျသားတို့ကို ခြောငျးလယျမှာ အပွတျခွမှေုနျးနိုငျမညျဖွဈသညျ။
လဂှနျးအိနျကလညျး ရာဇာဓိရာဇျ စီစဉျသညျ့အတိုငျး မလှဲအောငျစီစဉျ၍ သခြောပေါကျ အောငျအောငျမွငျမွငျတိုကျခိုကျနိုငျခဲ့သညျ။
တိုကျပှဲမထှကျမီ ညနပေိုငျးတှငျ ရာဇာဓိရာဇျ၏ အမိနျ့အရ မိဖုရားကွီး တလသုတမာယာသညျ လဂှနျးအိနျရှိရာ လှဆေီသို့ရောကျလာသညျ။လဂှနျးအိနျ ကို ကှမျးယာကြှေးပွီး အားပေးစကားပွောသညျ။သဖေို့မြားသောတိုကျပှဲကို ဆငျနှဲရမညျ့သူရဲကောငျးကို အားပေးခြီးမွှောကျသော ရာဇာဓိရာဇျ၏ စိတျထားဖွဈသညျ။
လဂှနျးအိနျအတှကျတော့ စဉျးစားစရာရှိပါသညျ။ဘုရငျ၏နညျးလမျးကိုလညျးယုံသညျ။သူ့အရညျအခငျြးကိုလညျးယုံသညျ။သို့သျော ရနျသူ့သတျကှငျးထဲသို့ ဝငျရောကျရမညျ့အနအေထားဖွဈ၍ တဈခကျြလေးခြှတျခြျောသှားသညျနှငျ့ သူနှငျ့သူ့တဈတပျလုံး ပွုတျပလေိမျ့မညျ။တိုကျပှဲ ထှကျဖို့၊ မထှကျဖို့ အပွနျပွနျစဉျးစားသညျ။နောကျဆုံးတှငျ သူ့ဘုရငျနှငျ့ သူ့နိုငျငံတျောအတှကျ အသကျပေးတိုကျရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။သို့သျောလညျး သူ့ဘုရငျက သူ့အပျေါတနျဖိုး ထား၊ မထား သိခငျြလှ၏။
နောကျတဈနေ့ နံနကျရောကျလာသညျ။ဘုရငျ့အမိနျ့အရ သူ့သူငယျခငျြး သူရဲကောငျးမြားဖွဈသော အမတျတိနျနှငျ့ ဗွတျဇတို့က သူ့ကိုလာနှုတျဆကျသညျ။သူတို့ရောကျလာတော့ လဂှနျးအိနျတဈယောကျ စောငျခွုံကာအိပျနေ၏။သူငယျခငျြးမြားက အတငျးနှိုးတော့မှ ထသညျ။သူတို့က တိုကျပှဲမထှကျသေးဘူးလားမေးတော့ သူက မိဖုရားကွီး တလသုတမာယာ ကို စှဲလမျးစိတျကွောငျ့ စဈမထှကျနိုငျတော့ကွောငျးပွောသညျ။သူတို့က အန်တရာယျမြားလှသော စကားတဈခှနျးကို ပွနျရုတျသိမျးဖို့ အမြိုးမြိုးပွောကွသျောလညျး သူကတော့ ဘုရငျသတျခငျြသတျပါစေ၊ သူ့စကားကိုမပွငျနိုငျကွောငျးပွောပွီး ပွနျအိပျနလေသေညျ။သူတို့လညျး ဘယျလိုမှပွောမရသညျ့အဆုံးတှငျ နနျးတျောကိုပွနျ၍ သူ့စကားအတိုငျး ဘုရငျကိုလြှောကျတငျလိုကျကွ၏။
ဘုရငျက အနညျးငယျမြှပငျတှဝေမေနဘေဲ၊ မိဖုရားကွီးကို လဂှနျးအိနျထံ လိုကျသှား၍ အလုပျအကြှေးပွုရနျ အမိနျ့ပေးသညျ။မိဖုရားကွီးနှငျ့ မှူးမတျမြားက တောငျးပနျသျောလညျး လကျမခံခြေ။နိုငျငံတျောအတှကျ တကယျလုပျဆောငျနိုငျသညျမှာ မိဖုရားကွီးမဟုတျ၊ သူရဲကောငျးမြားဖွဈသညျဟု အတညျပွုပွောဆိုလိုကျသညျ။မိဖုရားကွီးလညျး ဘုရငျ့အမိနျ့ကို မဖီဆနျဝံ့သညျမို့ လဂှနျးအိနျရှိရာသို့ လိုကျသှားရရှာသညျ။
မိဖုရားကွီး သူ့လှဆေီသို့လာနသေညျကိုမွငျသညျနှငျ့ လဂှနျးအိနျသညျ အိပျရာမှထကာ ခပျြဝတျတနျဆာမြား လဲလှယျဝတျဆငျပွီး မိဖုရားကွီးကို ကွိုဆို၍ ဦးတိုကျလြှောကျထားသညျ။
“ကြှနျတျောမြိုးကိုခှငျ့လှတျပါ မယျမယျ။မယျမယျ့အပျေါ စိတျနဲ့တောငျမပွဈမှားဝံ့ကွောငျးပါ။ကြှနျတျောမြိုး၏ဘုရငျက သူ့ပွညျသူ၊ သူ့သူရဲကောငျးမြားအပျေါ တနျဖိုး ထား၊ မထား သိခငျြ၍ စမျးသပျခွငျးဖွဈကွောငျးပါ”
ဘုရငျရာဇာဓိရာဇျ၏ ရှေးခယျြမှုကိုကွညျ့လြှငျ သူ၏ပွညျသူ၊ သူ၏သူရဲကောငျးအပျေါ တနျဖိုးထားလေးစားမှုကိုတှရေ့သညျ။
လဂှနျးအိနျ၏ ရှေးခယျြမှုကိုကွညျ့လြှငျလညျး သူအားကိုးရသောဘုရငျ၏ သူ့အပျေါတနျဖိုးထားလေးစားမှုကို သူ့အသကျထကျ အရေးတကွီးလိုအပျခဲ့ကွောငျး တှရေ့သညျ။
ပွညျသူတဈယောကျအနနှေငျ့ ပွညျသူကိုတနျဖိုးထား၍ ပွညျသူ့အကြိုးကို ဦးစားပေးဆောငျရှကျသော ခေါငျးဆောငျကိုရှေးသငျ့လား။ပွညျသူကိုတနျဖိုးမထားဘဲ ကိုယျကြိုးကိုသာ ဦးစားပေးဆောငျရှကျသော ခေါငျးဆောငျကိုရှေးသငျ့လား။
ခေါငျးဆောငျတဈယောကျအနနှေငျ့ ပွညျသူကိုတနျဖိုးထား၍ ပွညျသူ့အကြိုးကို ဦးစားပေးဆောငျရှကျသငျ့လား။မိမိ၏ကိုယျကြိုးကိုပဲ ဦးစားပေးဆောငျရှကျသငျ့လား။မိမိ အသကျရှညျ၊ ခမျြးသာ၊ အာဏာရှိပွီး ပွညျသူ၏ တနျဖိုးထားခွငျးမခံရသော ခေါငျးဆောငျဖွဈခငျြလား။မိမိ အသကျတို၊ ဆငျးရဲ၊ အာဏာမရှိသျောလညျး ပွညျသူ၏ မွတျမွတျနိုးနိုးတနျဖိုးထားခွငျးခံရသော ခေါငျးဆောငျ (ဥပမာ-ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး) ဖွဈခငျြလား။
What will you choose ? (သငျ) ဘာရှေးမလဲ။
Martin Luther King, junior ကတော့ ဒီလိုပွောခဲ့ပါသညျ။
လူတဈယောကျ၏ဘဝတှငျ ဘာအရေးကွီးလဲဆိုလြှငျ အသကျရှညျခွငျးမဟုတျ၊ တနျဖိုးရှိခွငျးဖွဈသညျ။
အောကျတိုဘာ - ၁
“နာမည်တစ်လုံးက ရွှေထက်တန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်၊ လူတစ်ယောက် တန်ဖိုး ရှိ၊ မရှိဆိုတာ သူဘယ်လောက်နာမည် ကောင်း၊ မကောင်းကြည့်ပြီး သိနိုင်တယ်”
“ဒါကြောင့်မို့ လူတွေက နာမည်လှလှလေးတွေမှည့်တာပေါ့၊ ဟုတ်လား”
“စကားကို အဲဒီလိုကပ်မပြောနဲ့လေ။ငါပြောတဲ့ နာမည်ကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာက ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့၊ ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါးမနစ်နာစေဖို့၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အများသူငါကောင်းစားရေးအတွက် ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုစွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့ အဲဒီလိုလူမျိုးကိုမှ နာမည်ကောင်းတဲ့လူလို့ ပြောချင်တာ”
“သူခိုးတို့၊ ခါးပိုက်နှိုက်တို့၊ ဓါးပြတို့၊ လူလိမ်တို့က နာမည်မကောင်းတဲ့သူတွေ။ဒီလိုလား”
“ကျောင်းဆရာတို့၊ ဆရာဝန်တို့၊ ဘုရင်တို့လို လူတွေကမှ နာမည်ကောင်းတဲ့သူတွေလို့ ပြောချင်တာလား”
“ဒါဆို အင်္ဂုလိမာလကို လက်ညှိုးတွေလိုက်ဖြတ်အောင် သင်ပေးတဲ့ဆရာက လူကောင်းပဲလား။သူ့နာမည်ကကောင်းလား။အဖေကိုပြန်သတ်အောင် သင်ပေးတဲ့ ဒေဝဒတ်လို ဆရာမျိုးကရော နာမည်ကောင်းရတဲ့ လူကောင်းပဲလား။သူ့လျှာ အရသာခံဖို့အတွက် တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ အသက်ကိုသတ်ပြီး အသားကိုစားတဲ့ ပေါရိသာဒလို ဘုရင်ကိုရော လူကောင်းလို့ပဲပြောမှာလား”
“တစ်ယောက်တလေ ဖေါက်ပြန်တာကိုတော့ ထည့်ပြောလို့ မဖြစ်ဘူးလေဟာ”
“တစ်ယောက်တလေလို့ မပြောပါနဲ့။တချို့တလေလို့ ပြောစမ်းပါ”
“နင်ကလည်း၊ စကားကို အထအနကောက်နေပြန်ပြီ။ကဲပါ နင်ပြောသလို တချို့တလေပဲထားပါတော့။ဒါပေမယ့် အများစုက ကောင်းတယ်လေဟယ်”
“အားလုံးကောင်းဖို့ အရေးကြီးတာလေဟာ။အဲဒီဖေါက်ပြန်တဲ့တချို့ကြောင့် လောကကြီးအရုပ်ဆိုးနေရတာမဟုတ်လား။အင်္ဂုလိမာလဖြတ်ခဲ့တဲ့ လက်ညှိုးက တစ်ထောင်မှမကတာ။ပေါရိသာဒဘုရင်ကြောင့် ပြည်သူတွေ ဘယ်နှယောက်တောင်သေခဲ့လဲ။
ဘဝတွေ ဘယ်လောက်ပျက်ခဲ့လဲ။စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့ကြမလဲ”
“ဟုတ်ပါပြီ။သူတို့တတွေ ဘယ်လောက်ခွန်အားကြီးကြီး၊ ဘယ်လောက်အာဏာရှိရှိ၊ ဘယ်လောက်ပညာတတ်တတ် ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတော့၊ အများအပေါ် မေတ္တာမထားတော့၊ အတ္တကြီးတော့ တခြားလူတွေ ဒုက္ခရောက်ရတယ်လေ။သူတို့နာမည်မကောင်းတော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့် ငါပြောတယ်မဟုတ်လား။နာမည်က ရွှေထက်ရှားပါတယ်လို့”
“နင်ကတော့လေ။ဆိုင်ဆိုင်၊ မဆိုင်ဆိုင် နင်ပြောချင်တာကို မရ ရအောင် ဇွတ်ပြောတော့တာပဲ”
“အေးပါ။ငါပြောချင်လွန်းအားကြီးလို့ပါ။ဒီနေ့ အာဇာနည်နေ့လေ။အခု၊ ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို ဂါရဝပြုဖို့ စောင့်နေတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ပြောချင်လို့ စကားစတာပါ”
“သြော် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတာ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသတာ၊ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် အသက်ကိုစွန့်ဝံ့တာ၊ ကိုယ်ကျိုးလုံးဝမဖက်တာ၊ ဒါကြောင့်လည်း လူသေပေမယ့် နာမည်မသေခဲ့တာ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကို သမိုင်းထဲကဖယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမှာမနစ်ဆိုတာလို ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ အသည်းထဲ၊ ရင်ထဲမှာ တို့ဗိုလ်ချုပ်ရှိနေတာပါလားဆိုတာ ပိုလို့ပိုလို့သိလိုက်ရလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုရည်ရွယ်ပြီး “နာမည်က ရွှေထက်ရှားတယ်” လို့ ငါစကားစခဲ့တာပါ”
“ဗိုလ်ချုပ်ကို လုပ်ကြံတဲ့သူတွေသာ တကယ်လို့ အဲဒီအချိန်ကစိတ်ပြောင်းသွားပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျေးဇူးကို ဆင်ခြင်မိတာမျိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကို အားနာမိတာမျိုး၊ ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကို မြင်ယောင်မိတာမျိုး၊ အနည်းဆုံး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်တစ်ခု၊ ဘဝတစ်ခုကို မဖျက်ဆီးချင်တော့တာမျိုး အသိလေးတစ်ချက်၊ သတိလေးတစ်ချက်လောက်များ ဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင် အားလုံးပြောင်းပြန်တွေဖြစ်ကုန်မှာပဲနော်။ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူ နင်တို့၊ ငါတို့ အဘိုးတွေ၊ အဘွားတွေ အရမ်းပျော်ခဲ့ကြရမှာ။တို့နိုင်ငံလည်း အခုလောက်ဆို အတော်ကြီးတိုးတက်နေမှာ--လို့”
“ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဟာ။သူတို့က ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် မစဉ်းစားဘဲ တစ်ဖက်က အာဏာနဲ့ငွေကို စဉ်းစားလိုက်တာကိုး”
“အင်း--သူတို့ရွေးချယ်ချက် အမှားတစ်ခုကြောင့် ငါတို့တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုက္ခပင်လယ်မှာ အနှစ်ခုနစ်ဆယ်နီးပါး မျောနေရတော့တာပေါ့”
အာဇာနည်ဗိမာန်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ဂါရဝပြုရန်စောင့်နေစဉ်၊ အနီးရှိ လူငယ်အုပ်စုမှ မိန်းမပျိုလေးနှစ်ယောက်၏ ပြောစကားများကို ကြားခဲ့ခြင်းပါ။
အလွမ်းလာ၍ လက်တို့ဆိုတာလို သူတို့ပြောခါမှ ဗိုလ်ချုပ်ကို ပို၍တမ်းတလာမိသည်။ပြည်သူအားလုံးလည်း တမ်းတနေကြမှာပါ။လွမ်းနေကြမှာပါ။သားသမီးတွေက အမေ့ကို သတိရတာမျိုး၊ တမ်းတတာမျိုးပါ။
သားသမီးတွေဟာ အမေ့ကို လုပ်ကျွေးဖြစ်တာ၊ မလုပ်ကျွေးဖြစ်တာထက် အမေ့ကိုတော့ ထူးထူးခြားခြား ချစ်ကြပါသည်။လွမ်းကြပါသည်။တမ်းတကြပါသည်။
အထူးသဖြင့် နို့ဆာသည့်အခါမျိုး၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲသည့်အချိန်မျိုး၊ ကူညီဖေးမမည့်သူမရှိဘဲ လောကဓံကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရသည့်အခါမျိုးတွေမှာ မျက်ရည်တွေ၊ ရှိုက်သံတွေနှင့်အတူ အမေ့ကို ပို၍လွမ်းတတ်ကြသည်။ပို၍တမ်းတတတ်ကြသည်။
အမေက အနားမှာမရှိသည့်အပြင် မိထွေးအနှိပ်စက်ကို ထပ်၍ခံလိုက်ရသောအခါမျိုးတွင်မူကား မိထွေးကို မုန်းတီးနာကြည်းစိတ်နှင့်အတူ အမေ့ကိုနှမြောတမ်းတစိတ်က ရင်ထဲမှာလည်းမဆံ့၊ ဦးနှောက်ကလည်းမထိန်းနိုင်လောက်အောင် ခံစားရတတ်တာပါ။အမိမဲ့သား ရေနည်းငါး ဆိုသလိုပေါ့။ပြည်သူတွေ အဲဒီလိုတမ်းတကြတာပါ။ဗိုလ်ချုပ်ကို အဲဒီလိုလွမ်းကြရတာပါ။
အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အမှန်၊ အမှားကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး၊ အများအကျိုးအတွက် အမြဲနှလုံးသွင်းကာ သက်စွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပါသည်။အမှန်တရားကို ရင်မှာထားသူဖြစ်၍ ကြောက်ရွံ့အားငယ်စိတ်မရှိသူ ဖြစ်ပါသည်။အတ္တကို စွန့်လွှတ်နိုင်သူဖြစ်၍ self-confidence အပြည့်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း တစ်ယောက်၊ တစ်ရာ၊ တစ်ထောင်မက တစ်ကုဋေမှာ၊ ကုဋေတစ်ရာမှာ တစ်ယောက်ရှိဖို့ မလွယ်သူမျိုးပါ။သူတို့၏စွမ်းအားကကြီးပါသည်။သူတို့၏သွေးကပျစ်ပါသည်။ရဲရဲနီပါသည်။
အာဇာနည်ဗိုလ်ချုပ်၏ သွေးတစ်စက်သည်ပင် ယနေ့ ပြည်သူများ၏ဘဝကို အကာအကွယ်ပေးနေပါပြီ။အလင်းရောင်ပေးနေပါပြီ။လမ်းပြပေးနေပါပြီ။
အာဇာနည်များက သူတို့ကိုယ်ကျိုးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုး နှစ်ခုတွင် ပြည်သူ့အကျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ကြပါ သည်။
အာဇာနည်စိတ်မရှိသည့်အပြင် အာဇာနည်များအပေါ် မနာလိုစိတ်၊ ရန်လိုစိတ်ထားသူများကတော့ သူတို့ကိုယ်ကျိုးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုး နှစ်ခုတွင် သူတို့ကိုယ်ကျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ကြပါသည်။
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များသည် နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ထို့ကြောင့်၊ နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုး၊ ပြည်သူ့ကောင်းကျိုးကိုသာ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
Francis Bacon ၏ အဆိုလေးကို သတိရပါသည်။
“အကြံကောင်းပေးသောသူသည် (သင့်အား) လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကူညီသူဖြစ်၏။အကြံကောင်းရော၊ လက်တွေ့နမူနာပါပြသောသူသည် လက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့်ကူညီသူဖြစ်၏။သို့သော် ကောင်းသော ဆုံးမစကားကိုပြောပြီး မကောင်းသောနမူနာကိုပြလျှင်မူ လက်တစ်ဖက်ကဆွဲတင်၍ ကျန်လက်တစ်ဖက်က ဆွဲနှစ်သူဖြစ်လေသည်။”
ပြည်သူတွေ တကယ်လိုအပ်တာက ပြည်သူကိုတန်ဖိုးထားသော ခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်သည်။
ပြည်သူတွေရှောင်ရမှာက ပြည်သူကိုတန်ဖိုးမထားသော ခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်သည်။
အင်းဝခေတ်က ဟံသာဝတီဘုရင် ရာဇာဓိရာဇ်၏ သူရဲကောင်း လဂွန်းအိန် ပုသိမ်သားတို့ကို အောင်ပွဲမဆင်မီကဖြစ်သည်။ပုသိမ်သားတို့ကိုတိုက်ရန် ဝင်ရောက်ရမည့်ချောင်းသည် အလွန်ကျဉ်မြောင်းသဖြင့် ပြန်ထွက်ရန်မလွယ်ကူလှပေ။အတွင်းသို့ဝင်တိုက်မိသည်ဆိုသည်နှင့် သေဖို့ကများပေသည်။
ရာဇာဓိရာဇ်က တိုက်ပွဲအတွက် နည်းပရိယာယ်ကိုတော့ အစီအစဉ်ဆွဲပေး၏။တိတ်တဆိတ်သွား၍ ထိုချောင်းထဲတွင် တိုင်များစိုက်ရမည်။ရေတက်ခါစတွင် တိုင်ဖျားများပေါ်ရုံလေးရှိပြီး၊ ရေဆက်တက်လာလျှင် တိုင်ဖျားနစ်အောင်စိုက်ထားစေ၏ လဂွန်အိန်ကိုယ်တိုင် ထိုချောင်းအတိုင်းဝင်၍ ပုသိမ်သားတို့ကို စစ်မြှူရမည်။ပုသိမ်သားတို့ထွက်တိုက်လျှင် စိုက်ထားသည့်တိုင်များကို လွတ်အောင်လှော်၍ ပြန်ပြေးထွက်ရမည်။ပုသိမ်သားတို့က အင်နှင့်အားနှင့်လိုက်တိုက်လိမ့်မည်။ထိုအခါ ပုသိမ်သားတို့၏လှေများ တိုင်များအကြားတွင်ငြိပြီး ကန့်လန့်ခံနေလိမ့်မည်။သည်တော့မှ ရှေ့တိုးမရ၊ နောက်ဆုတ်မရနှင့် တစ်စုတဝေးတည်းဖြစ်နေသော ပုသိမ်သားတို့ကို ချောင်းလယ်မှာ အပြတ်ခြေမှုန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လဂွန်းအိန်ကလည်း ရာဇာဓိရာဇ် စီစဉ်သည့်အတိုင်း မလွဲအောင်စီစဉ်၍ သေချာပေါက် အောင်အောင်မြင်မြင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲမထွက်မီ ညနေပိုင်းတွင် ရာဇာဓိရာဇ်၏ အမိန့်အရ မိဖုရားကြီး တလသုတမာယာသည် လဂွန်းအိန်ရှိရာ လှေဆီသို့ရောက်လာသည်။လဂွန်းအိန် ကို ကွမ်းယာကျွေးပြီး အားပေးစကားပြောသည်။သေဖို့များသောတိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲရမည့်သူရဲကောင်းကို အားပေးချီးမြှောက်သော ရာဇာဓိရာဇ်၏ စိတ်ထားဖြစ်သည်။
လဂွန်းအိန်အတွက်တော့ စဉ်းစားစရာရှိပါသည်။ဘုရင်၏နည်းလမ်းကိုလည်းယုံသည်။သူ့အရည်အချင်းကိုလည်းယုံသည်။သို့သော် ရန်သူ့သတ်ကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ရမည့်အနေအထားဖြစ်၍ တစ်ချက်လေးချွတ်ချော်သွားသည်နှင့် သူနှင့်သူ့တစ်တပ်လုံး ပြုတ်ပေလိမ့်မည်။တိုက်ပွဲ ထွက်ဖို့၊ မထွက်ဖို့ အပြန်ပြန်စဉ်းစားသည်။နောက်ဆုံးတွင် သူ့ဘုရင်နှင့် သူ့နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ပေးတိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။သို့သော်လည်း သူ့ဘုရင်က သူ့အပေါ်တန်ဖိုး ထား၊ မထား သိချင်လှ၏။
နောက်တစ်နေ့ နံနက်ရောက်လာသည်။ဘုရင့်အမိန့်အရ သူ့သူငယ်ချင်း သူရဲကောင်းများဖြစ်သော အမတ်တိန်နှင့် ဗြတ်ဇတို့က သူ့ကိုလာနှုတ်ဆက်သည်။သူတို့ရောက်လာတော့ လဂွန်းအိန်တစ်ယောက် စောင်ခြုံကာအိပ်နေ၏။သူငယ်ချင်းများက အတင်းနှိုးတော့မှ ထသည်။သူတို့က တိုက်ပွဲမထွက်သေးဘူးလားမေးတော့ သူက မိဖုရားကြီး တလသုတမာယာ ကို စွဲလမ်းစိတ်ကြောင့် စစ်မထွက်နိုင်တော့ကြောင်းပြောသည်။သူတို့က အန္တရာယ်များလှသော စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်ရုတ်သိမ်းဖို့ အမျိုးမျိုးပြောကြသော်လည်း သူကတော့ ဘုရင်သတ်ချင်သတ်ပါစေ၊ သူ့စကားကိုမပြင်နိုင်ကြောင်းပြောပြီး ပြန်အိပ်နေလေသည်။သူတို့လည်း ဘယ်လိုမှပြောမရသည့်အဆုံးတွင် နန်းတော်ကိုပြန်၍ သူ့စကားအတိုင်း ဘုရင်ကိုလျှောက်တင်လိုက်ကြ၏။
ဘုရင်က အနည်းငယ်မျှပင်တွေဝေမနေဘဲ၊ မိဖုရားကြီးကို လဂွန်းအိန်ထံ လိုက်သွား၍ အလုပ်အကျွေးပြုရန် အမိန့်ပေးသည်။မိဖုရားကြီးနှင့် မှူးမတ်များက တောင်းပန်သော်လည်း လက်မခံချေ။နိုင်ငံတော်အတွက် တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်မှာ မိဖုရားကြီးမဟုတ်၊ သူရဲကောင်းများဖြစ်သည်ဟု အတည်ပြုပြောဆိုလိုက်သည်။မိဖုရားကြီးလည်း ဘုရင့်အမိန့်ကို မဖီဆန်ဝံ့သည်မို့ လဂွန်းအိန်ရှိရာသို့ လိုက်သွားရရှာသည်။
မိဖုရားကြီး သူ့လှေဆီသို့လာနေသည်ကိုမြင်သည်နှင့် လဂွန်းအိန်သည် အိပ်ရာမှထကာ ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပြီး မိဖုရားကြီးကို ကြိုဆို၍ ဦးတိုက်လျှောက်ထားသည်။
“ကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်လွှတ်ပါ မယ်မယ်။မယ်မယ့်အပေါ် စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဝံ့ကြောင်းပါ။ကျွန်တော်မျိုး၏ဘုရင်က သူ့ပြည်သူ၊ သူ့သူရဲကောင်းများအပေါ် တန်ဖိုး ထား၊ မထား သိချင်၍ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါ”
ဘုရင်ရာဇာဓိရာဇ်၏ ရွေးချယ်မှုကိုကြည့်လျှင် သူ၏ပြည်သူ၊ သူ၏သူရဲကောင်းအပေါ် တန်ဖိုးထားလေးစားမှုကိုတွေ့ရသည်။
လဂွန်းအိန်၏ ရွေးချယ်မှုကိုကြည့်လျှင်လည်း သူအားကိုးရသောဘုရင်၏ သူ့အပေါ်တန်ဖိုးထားလေးစားမှုကို သူ့အသက်ထက် အရေးတကြီးလိုအပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနှင့် ပြည်သူကိုတန်ဖိုးထား၍ ပြည်သူ့အကျိုးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သော ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးသင့်လား။ပြည်သူကိုတန်ဖိုးမထားဘဲ ကိုယ်ကျိုးကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သော ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးသင့်လား။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနှင့် ပြည်သူကိုတန်ဖိုးထား၍ ပြည်သူ့အကျိုးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်လား။မိမိ၏ကိုယ်ကျိုးကိုပဲ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်လား။မိမိ အသက်ရှည်၊ ချမ်းသာ၊ အာဏာရှိပြီး ပြည်သူ၏ တန်ဖိုးထားခြင်းမခံရသော ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်လား။မိမိ အသက်တို၊ ဆင်းရဲ၊ အာဏာမရှိသော်လည်း ပြည်သူ၏ မြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားခြင်းခံရသော ခေါင်းဆောင် (ဥပမာ-ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) ဖြစ်ချင်လား။
What will you choose ? (သင်) ဘာရွေးမလဲ။
Martin Luther King, junior ကတော့ ဒီလိုပြောခဲ့ပါသည်။
လူတစ်ယောက်၏ဘဝတွင် ဘာအရေးကြီးလဲဆိုလျှင် အသက်ရှည်ခြင်းမဟုတ်၊ တန်ဖိုးရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ - ၁